ငါး reels နှင့် 243 paylines slot နှစ်ခု, အဆိုပါသဲသောင်ပြင်ပေါ်ဆမ်လျှပ်စစ်ဆမ်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး trolls အပေါ်အခြေခံသည်. သူကကာရစ်ဘီယံမှတစ်ဦးအားလပ်ရက်အပေါ်သူ၏မိသားစုနှင့်အတူဤအချိန်. ကမ်းခြေပေါ်တွင်ပျော်စရာ outing ၌သူတို့ကို join. ဒါကပျော်စရာဂိမ်းပေါ်မှာကစားရန်ရရှိနိုင်ပါသည် ဗြိတိန်နိုင်ငံကအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ.
ဆတ်စတူဒီယိုဝန်းကျင်ကတည်းကပင်ဖြစ်ပါတယ် 2012 ကာထူးချွန်လောင်းကစားရုံ software ကို developer အဖြစ်တက်ရောက်လေပြီ. အဆိုပါကုမ္ပဏီအများအပြားဂိမ်းအော်ပရေတာများအတွက်ဂိမ်းဖြန့်ဖြူး. ဤသည် slot ကသူတို့ကိုကတီထွင်နေသည်နှင့်မှာကစားနိုင်ပါတယ် ဗြိတိန်နိုင်ငံကအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ.
ဤသည် slot ကအခြေခံငါးခု reels ရှိပေမယ့်စုစုပေါင်းရှိပါတယ်စေခြင်းငှါ 243 သင်ကစားပွဲနေရာနှင့်အနိုင်ရနိုင်သည့်အတွက်နည်းလမ်းများ. ဂိမ်းရဲ့အမြင်အာရုံနှစ်သက်ဖွယ်နောက်ခံကမ်းခြေတစ်စုံလင်သောမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုပြသ. အဆိုပါ reels ပေါ်သင်္ကေတအားဖြင့်မှာကစားနိုင်သောဂိမ်းအတွက်ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီအားလုံးများမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံကအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ. အဆိုပါအနိမ့်တန်ဖိုးကိုသင်္ကေတဟာနီယွန်အရောင်ကဏန်းများမှာ, ငါးကြက်တံခွန်, နှင့် seahorses. high-တန်ဖိုးကိုသင်္ကေတများဆမ်သည်သူ၏ဇနီးစန်ဒရာတို့ပါဝင်သည်သော trolls နဲ့သူ့မိသားစုများမှာ, သူ့အစ်ကို, Ted, နှင့်သူ၏သမီးမဂ္ဂီ.
ဒီအမျိုးမျိုးသော features တွေ ဗြိတိန်နိုင်ငံကအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ အထိုင်များမှာ:
အခမဲ့လှည့်ဖျား- အဆိုပါကြဲဖြန့်အဆိုပါခေါင်းလောင်းအိုင်ကွန်နှင့် reels.You ပေါ်ဤအကြောင်းအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေ, ပြည်သုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရလိမ့်မည်သည့်အခါကဒီ feature ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း 5, 10, သို့မဟုတ် 15 ဆင်းသက်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ 3, 4, သို့မဟုတ်5ကြဲဖြန့်.
သဲသောင်ပြင်အမှတ်တရများ Respin- သင်တို့ရှိသမျှမိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအလျားလိုက်လိုင်းပေါင်းစပ်ကြတဲ့အခါမှာသို့ဖြစ်လျှင်ဤအင်္ဂါရပ်အစပျိုးလိမ့်မည်. သင်နှင့်အတူတစ် respin ရ4စေးကပ်လွင်ပြင်.
လျှပ်စစ်ရယူထားသော- ဒီ feature အခမဲ့လှည့်ဖျားလှည့်လည်စဉ်ကအသကျရှငျအပေါင်းတို့နှင့်လေးမိသားစုဝင်တွေကဒီတစ်အခန်းကဏ္ဍ. ထိုး3သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဆမ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ icon များနှင့်သူထို့နောက်စေးကပ်ရိုင်းဖြစ်လာသည့်ကျပန်းအိုင်ကွန် electrifies. ထိုး3သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုစန်ဒရာ icon များနှင့်သူမ 10x မြှောက်ကိန်းမှတက်ပေးသည်3မဂ္ဂီ icon များနှင့်သူမအပေါငျးတို့သနိမ့်တန်ဖိုးကို icon များအောင်အားဖြင့်သင့်အနိုင်ရတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုပိုကောင်းစေပါတယ်အဆိုပါ reels ထံမှပျောက်ကွယ်သွား. ထိုး3Ted icon များနှင့်သူသည်သင်တို့တစ်စေးကပ်မြှောက်ကိန်းပေးသည်.
ဒါဟာ ပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်, ဂိမ်းကိုစိတ်ဝင်စားသငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန် features တွေအများအပြားနှင့်အတူပျော်စရာဂိမ်း. အဆိုပါ ဗြိတိန်နိုင်ငံကအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ ဂိမ်းကိုသင်မှတက်အနိုင်ရခွင့်ပြု 2,275 အဆသင့်ရဲ့အာမခံ.